မိုးကုတျနားက TNLA နဲ့ အစိုးရတပျတို့ တိုကျပှဲမှာ သဆေုံးဒဏျရာရသူတှရှေိ – Voice of Myanmar
မိုးကုတျနားက TNLA နဲ့ အစိုးရတပျတို့ တိုကျပှဲမှာ သဆေုံးဒဏျရာရသူတှရှေိ
မိုးကုတျနဲ့ ၆ မိုငျအကှာလောကျမှာရှိတဲ့ ပိနျးပွဈရှာ ဓါတျတျောတောငျနဲ့ ခြောငျးကွီးကွားမှာ TNLA နဲ့ အစိုးရတပျတို့ နိုဝငျဘာ ၂၄ရကျ ည ၇ နာရီကြျောကနေ ၉နာရီဝနျးကငျြထိ တိုကျပှဲဖွဈလို့ ဒဏျရာရတဲ့သူတှေ မိုးကုတျဆေးရုံကို တခြို့ရောကျလာတယျလို့သိရပါတယျ။ မနညေ့က တိုကျပှဲဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြူပျဇျောမငျးထှနျးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးကွညျ့တော့
“တပျမတျောက နယျမွလေုံခွုံရေးဆောငျရှကျနတော မိုးကုတျမွောကျ မီတာ ၂၀၀၀ မှာ သတငျးရလို့ ကငျးပုနျးဝတျတော့ မနျနားရှာဘကျကလာတဲ့ TNLA ၃၀ လောကျထိတှမှေု့ဖွဈတာပါ၊ TNLA က မွောကျဘကျထှကျသှားတော့ လိုကျလံရှငျးတာကနေ အပွနျလှနျပဈခတျမှုဖွဈတာ၊ ည ၇ နာရီ ၅၀ ကနေ ၉ နာရီလောကျထိဖွဈတယျ။ မွို့လုံခွုံရေးသတငျးရလို့ ကငျးပုနျးဝတျရငျးနဲ့ ဖွဈတာပါ။ မိုးကုတျမှာကလညျး TNLA ကနေ လှနျခဲ့တဲ့ ၄လလောကျက မိုးကုတျကနဆေငျးတဲ့ ရဲတှဖေမျးတာ စိမျ့ဝငျလှုပျရှားနတော သိရတယျ။ ထိခိုကျကဆြုံးကတော့ ကနြျောတို့ဘကျက စဈသညျ ၁ဦးကပြွီး တယောကျဒဏျရာရပါတယျ” လို့ ဖွပေါတယျ။
ဒီတိုကျပှဲဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး TNLA ကိုVOM က ဆကျသှယျနပေမေယျ့ အဆကျသှယျမရသေးလို့ သူတို့ဘကျက တုံ့ပွနျခကျြကို မသိရသေးပါဘူး။ အမညျမဖျေါလိုတဲ့ မိုးကုတျဒသေခံတယောကျပွောပွတာကတော့
“မိုးကုတျတိုကျပှဲဖွဈစဥျက ဆကျကွေးလာကောကျလို့ တပျနဲ့ထိတှမှေုဖွဈတာမဟုတျပါဘူး၊ မူးယဈဆေးဝါးတှကေို TNLA နယျမွကေိုဖွတျကြျောပွီးသယျနလေို့. လာရောကျပွီး မူးယဈဆေးဝါးမသုံးဖို့၊ မသယျဖို့လာပွောတယျ။ ရှာတှကေ မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲသူတှကေို ချေါဆုံးမတာတှရှေိတယျ။ တပျကလညျးဒသေအတှငျးအပွောငျးအရှလေု့ပျနတေော့ နယျမွကေလညျး TNLA ဝငျလို့ရတဲ့နယျမွမေဟုတျဘူး ဒါကွောငျ့ထိတှမှေုဖွဈတာပါ” လို့ဆိုပါတယျ။
အတညျမပွုနိုငျသေးတဲ့ သတငျးတှအေရ တိုကျပှဲနဲ့ဆကျစပျပွီး မိုးကုတျဆေးရုံကို ထိခိုကျဒဏျရာရ လူနာ ၄ယောကျရောကျလာတယျလို့သိရပါတယျ။ မိုးကုတျမွို့ပျေါက ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးတယောကျကိုမေးကွညျ့တော့
“ ဒီမနကျပိုငျးမှာ ငွိမျတယျ အပွငျမှာအသံတခြို့ကွားတာတော့ တပျက အနညျးကဉျြးထိလို့ ဆေးရုံရောကျတယျကွားတယျ သှာကွညျ့လို့တော့မရဘူး ရှဂေူကွီးကြောငျးကို စဈရှောငျ ၂၀ ကြျောထပျရောကျတယျ အရငျက ၆၀ ကြျောရှိတယျ လတျတလော ဘုနျးကွီးကကြှေးထားပါတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
ခါတိုငျးနှဈတှကေလညျး ဒီလိုပှငျ့လငျးရာသီအစမှာ တိုကျပှဲငယျ ခဏတဖွုတျဖွဈတတျပမေယျ့ ခဏနရေငျ အေးခမျြးသှားတတျလို့ ဒသေခံတှကေတော့ အခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့နကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။
#Voiceofmyanmar #VOM #မိုးကုတျတိုကျပှဲ #TNLA
မိုးကုတ်နားက TNLA နဲ့ အစိုးရတပ်တို့ တိုက်ပွဲမှာ သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေရှိ
မိုးကုတ်နဲ့ ၆ မိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ ပိန်းပြစ်ရွာ ဓါတ်တော်တောင်နဲ့ ချောင်းကြီးကြားမှာ TNLA နဲ့ အစိုးရတပ်တို့ နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက် ည ၇ နာရီကျော်ကနေ ၉နာရီဝန်းကျင်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေ မိုးကုတ်ဆေးရုံကို တချို့ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ မနေ့ညက တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချူပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့
“တပ်မတော်က နယ်မြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတာ မိုးကုတ်မြောက် မီတာ ၂၀၀၀ မှာ သတင်းရလို့ ကင်းပုန်းဝတ်တော့ မန်နားရွာဘက်ကလာတဲ့ TNLA ၃၀ လောက်ထိတွေ့မှုဖြစ်တာပါ၊ TNLA က မြောက်ဘက်ထွက်သွားတော့ လိုက်လံရှင်းတာကနေ အပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာ၊ ည ၇ နာရီ ၅၀ ကနေ ၉ နာရီလောက်ထိဖြစ်တယ်။ မြို့လုံခြုံရေးသတင်းရလို့ ကင်းပုန်းဝတ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်တာပါ။ မိုးကုတ်မှာကလည်း TNLA ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လလောက်က မိုးကုတ်ကနေဆင်းတဲ့ ရဲတွေဖမ်းတာ စိမ့်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာ သိရတယ်။ ထိခိုက်ကျဆုံးကတော့ ကျနော်တို့ဘက်က စစ်သည် ၁ဦးကျပြီး တယောက်ဒဏ်ရာရပါတယ်” လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး TNLA ကိုVOM က ဆက်သွယ်နေပေမယ့် အဆက်သွယ်မရသေးလို့ သူတို့ဘက်က တုံ့ပြန်ချက်ကို မသိရသေးပါဘူး။ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ မိုးကုတ်ဒေသခံတယောက်ပြောပြတာကတော့
“မိုးကုတ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်က ဆက်ကြေးလာကောက်လို့ တပ်နဲ့ထိတွေမှုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို TNLA နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသယ်နေလို့. လာရောက်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးဖို့၊ မသယ်ဖို့လာပြောတယ်။ ရွာတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေကို ခေါ်ဆုံးမတာတွေရှိတယ်။ တပ်ကလည်းဒေသအတွင်းအပြောင်းအရွှေ့လုပ်နေတော့ နယ်မြေကလည်း TNLA ဝင်လို့ရတဲ့နယ်မြေမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်ထိတွေမှုဖြစ်တာပါ” လို့ဆိုပါတယ်။
အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေအရ တိုက်ပွဲနဲ့ဆက်စပ်ပြီး မိုးကုတ်ဆေးရုံကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ လူနာ ၄ယောက်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။
“ ဒီမနက်ပိုင်းမှာ ငြိမ်တယ် အပြင်မှာအသံတချို့ကြားတာတော့ တပ်က အနည်းကျဉ်းထိလို့ ဆေးရုံရောက်တယ်ကြားတယ် သွာကြည့်လို့တော့မရဘူး ရွေဂူကြီးကျောင်းကို စစ်ရှောင် ၂၀ ကျော်ထပ်ရောက်တယ် အရင်က ၆၀ ကျော်ရှိတယ် လတ်တလော ဘုန်းကြီးကကျွေးထားပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်တွေကလည်း ဒီလိုပွင့်လင်းရာသီအစမှာ တိုက်ပွဲငယ် ခဏတဖြုတ်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ခဏနေရင် အေးချမ်းသွားတတ်လို့ ဒေသခံတွေကတော့ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
#Voiceofmyanmar #VOM #မိုးကုတ်တိုက်ပွဲ #TNLA